सिंहदरबार प्रवेश गर्ने ४ द्वारको ऐतिहासिक स्वरुप मास्ने तयारी - सिंहदरबार प्रवेश गर्ने ४ द्वारको ऐतिहासिक स्वरुप मास्ने तयारी
सिंहदरबार प्रवेश गर्ने ४ द्वारको ऐतिहासिक स्वरुप मास्ने तयारी
२०७५, २6 माघ, 09:58:16 PM
काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने चारवटै द्वारको ऐतिहासिक स्वरुप परिवर्तन गर्ने भएको छ । राणाकालिन ऐतिहासिक सम्पदा समेत रहेका सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तर्फका चारवटा द्वारको ऐतिहासिक स्वरुप मासेर नयाँ बनाउँन सरकारले स्वीकृति समेत दिएको हो । सिंहदरबारका गेट ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व झल्कने गरी पुननिर्माण गर्ने भनिएपनि आधुनिकताका नाममा अहिलेको स्वरुप वदल्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाई छ । राणा कालमा निर्माण गरिएका सिंहदरबारका गेट पञ्चायतकालका समयमा पहिलेकै स्वरुपमा पुननिर्माण भएको थियो ।
सिंहदरबार प्रवेश गर्न सर्वसाधारणले दक्षिण तर्फको द्वार प्रयोग गर्दै आएका छन् । पश्चिम तर्फ राष्ट्रनिर्मात पृथ्वीनारायण शाहको शालीक अगाडीबाट भने भीभीआइपी/भीआइपी तथा सिंहदरबार भित्रैक ४ पांग्रे सबारीलाई मात्र प्रवेश दिइन्छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा अगाडि र पूर्व तर्फको प्रवेशद्वार भने सिंहदरबार भित्रका कर्मचारीका लागि मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका अधिकारीले सिंहदरकार प्रवेश गर्ने चारवटै द्वारलाई आधुनिकता झल्कने गरी निर्माण तथा मर्मत गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
गत पुस १८ गते मूख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसरभित्र पस्ने गेटहरु ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व दर्शने गरी पुननिर्माण एवं मर्मत गर्ने ।” २०७६ असार मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम थाल्न सचिव बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
संसदीय विशेष सुनुवाइ समिति : चार राजदूत अनुमोदित
पञ्चायती मोडेल, भ्रष्ट शासन र असारे विकास
सांसदलाई ६ करोड किन दिने ? कारण बताउ सरकार !
जनार्दन भन्छन्, पाँच ठाउँमा हात भाँचिदिएर गोली हानेपछि मुठभेड भन्‍न मिल्छ ?
कर्मचारी संयन्त्र : राष्ट्रसेवक कि पार्टी सेवक ?